विश्वकप फुटबलमा यी शीर्ष नेताहरू कुन देशको समर्थक ? - Namaste Times
मंगलबार, चैत्र ०५, २०७५ | Saturday, June 9, 2018
विश्वकप फुटबलमा यी शीर्ष नेताहरू कुन देशको समर्थक ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २६, २०७५ समय: ६:५२:४१
काठमाडौं – विश्वकप फुटबल संसारभर सर्वाधिक हेरिने प्रतियोगिता हो । फुटबलको यो महाकुम्भ सुरु हुन अब ५ दिन मात्र बाँकी छ । विश्वभरबाट छनोट चरण पार गर्दै ३२ देशले रसियामा हुन लागेको विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
भौगोलिक रूपमा प्रतियोगितास्थल नेपालबाट झन्डै ५ हजार किलोमिटर टाढा भए पनि विश्वकपको रौनकले नेपाललाई पूरै छोएको छ ।
त्यहाँ बर्सिने गोलले विश्वका दूरदराजसम्मका दर्शकको मुटुको धड्कन बढाउँछ । प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा संसारभरका कैयौँ दर्शक आ–आफ्ना देशको समर्थनका लागि रुस पुग्ने तरखरमा छन् ।
उनीहरूले एक महिनाअघि नै आफ्नो सिट सुरक्षित गरिसकेका छन् । अन्य करोडौँ दर्शक घर–टोलमै रहेर टेलिभिजनको पर्दामा आफूलाई मन पर्ने टिमको समर्थनमा हुटिङ गर्ने तयारीमा छन् । विश्वकपमा कसले जित्छ भन्दै बाजी लगाउनेको संख्या पनि विश्वमा कम छैैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
नेपालमा विशेष गरी काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा मन पर्ने टिमको जर्सी किन्नेको भिडभाड देखिन्छ । विश्वकपकै लागि नयाँ टेलिभिजन किन्ने पनि भेटिन्छन् । विश्वकपले सबै क्षेत्रका व्यक्तिको ध्यान मस्कोतिर तोनेको छ । विभिन्न क्षेत्रका सेलेब्रिटीले नयाँ पत्रिकासँग विश्वकप योजना सुनाएका छन् :
विद्यार्थीदेखि पाका नेतासम्ममा फुटबल क्रेज
विश्वकपले पाका नेतादेखि स्कुले विद्यार्थीसम्मलाई छोएको छ । कलाकारदेखि व्यापारीसम्मका बीचमा विश्वकपका नतिजाबारे अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विश्वकपकै बहस छ ।
विश्वकप लाइभको आनन्द लिन कतिपयले घरमै प्रोजेक्टर जोड्ने तयारी पनि गरेका छन् । नेकपाका नेता झलनाथ खना, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले घरकै टिभीमा विश्वकप हेर्ने योजना बनाएका छन् ।
राप्रपा नेता कमल थापाले भने नकआउट चरणका खेल प्रोजेक्टरमा हेर्ने तयारी गरेका छन् । गायक राजेशपायल राईले पनि केही दिनमै घरमै प्रोजेक्टर जोडेर विश्वकपको आनन्द लिने योजना बनाएका छन् ।
बढ्यो जर्सीको व्यापार
विश्वकप प्रतियोगिता नजिकिदै गर्दा नेपालमा ब्रान्डेड पसलदेखि फुटपाथसम्म जर्सीको व्यापार फस्टाएको छ । साहस स्पोर्टस्का सञ्चालक जनक न्यौपानेले पछिल्ला चार विश्वकपयता विभिन्न टिमका जर्सी व्यापार गर्दै आएका छन् ।
अघिल्लो विश्वकपमा सर्वाधिक जर्सी बिकेको उनको अनुभव छ । यसपटक पनि व्यापार कम छैन । अहिले जर्सी बेच्ने पसल बढेकाले एउटै पसलमा व्यापार कम भएको, तर समग्रमा पहिलेभन्दा बढेको उनको बुझाइ छ ।
यसपटक जर्मनीको जर्सी सबैभन्दा बढी बिकेको छ । दोस्रोमा अर्जेन्टिना र तेस्रोमा ब्राजिलको जर्सी बिकेका छन् । एसियाली देशको हकमा जापानको जर्सी बढी बिकेको न्यौपानेले बताए ।